Jimcuhu (friday) waa maalin boqran oo Muslinku yeesho kulammo dadweyne, la iskaga warramo arrimaha markaas jira ee bulsho walba halkeeda ku haysta.
Thursday June, 21 2018 - 05:13:07
Friday January 12, 2018 - 18:11:23 in by Cerigabo Office
Jimcuhu (friday) waa maalin boqran oo Muslinku yeesho kulammo dadweyne, la iskaga warramo arrimaha markaas jira ee bulsho walba halkeeda ku haysta. Khudbadda Jimcuhu milgo weyn bay leedahay. Dadka dhegaysanaya in aanay hadlin oo hadalkaasi fadligii jimcaha dhaawacayaa waa maamus ay khudbadda Jimce leedahay. Wadaad walba oo khudbad jeedinayaa yoomkaas, masuuliyad weyn baa saaran. Dadkaa aamuska la amray in aanu ku tagrifalin caqligoda iyo garashadooda. In uu waqti geliyo diyaarinta khudbadda iyo in uu aqoon u lahaado sida loola hadlo dadku waa arrin ay dhayalsadeen ama mogganyihiin wadaaddo badani.
Wadaadka qaarkii bay farriintani ku aaddantahay. Waa kuwa marba wixii maskaxdooda ku soo dhaca makarafoonka mariya, waa kuwa hadallada aan maangalka ahayn yeedhiya. Waa kuwa iyada oo cadceedda dad badani fadhiyaan saacad iyo ka badan iska hadla ee aan xaaladda iyo dareenka qiimeyn. Yar iyo weyn, cirroole iyo carruur, dhaawac iyo danle aan aqoon ama ogayn in uu tukinayo.
Wadaadoow ha u malayn dadkaas aad dareenkooda iyo garaadkooda dhayalsanaysaa in aanay ogayn ama aanad dambi ku lahayn. Waxa ugu yari waa in aad masaajiddada ka dhigayso meel laga walaaco iyo meel aan aqoon hagaagsani ool iyo in loo arko meel juhalo maamusho.
Awoodda khudbadda jimce ku siisay wadaadow, waa in aanad moodin in aad awooddaas leedahay sida aad doontana ka yeeli karto.
Jimce Wanaagsan Asxaabta
Eritrea:-Dibadbaxyo looga soo horjeedo Eritrea oo maalintii labaad socda Iyo Arimaha Laga Soo Hor Jeedo.
Tuke-raq:-Waa Sidee Xaalada Dadka Ku Nool Deeganka Degmada Tuke-raq +Maxaa Ka Jira In Ay Barakaceen.
03/06/2018 - 11:26:27